A Violent Prosecutor (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
N/A 2016 126 min Crime
IMDB: 6.6/10 1,642 votes
Han Jae-young, Hwang Jung-min, Kang Dong-won, Kim Eung-soo, Lee Sung-min, Park Jong-hwan, Park Sung-woong
Byun Jae Wook(Hwang Jun Min)ဟာ အစိုးရရှနေ့အေဖွဈလုပျကိုငျလာတာကွာပါပွီ… သူဟာဒေါသကွီးတယျစိတျမရှညျပွီးတော့
ဒါ့အပွငျသကျသတှေအေားလုံးကလညျးရှနေ့ေJae Wookကိုပဲညှနျပွနပေါတယျ…အဲ့လိုနဲ့ရှနေ့ေJae Wookဟာလူသတျသမားအဖွဈ
သူဟာထောငျထဲမှာစစရောကျခွငျးသိပျမရငျးနှီးပမေယျ့မကွာခငျသူရဲ့အရငျရှနေ့အေလုပျအတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ထောငျသားတှကေိုကူညီပေးပွီးထောငျသားတှခေဈြခငျလေးစားရဲ့အကိုကွီးဖွဈလာပါတော့တယျ…သူနတေဲ့ထောငျမှာ”ဆရာ”တဈဆူလိုအေးဆေးဖွဈလာပါတော့တယျ…၅နှဈအကွာမှာChi Won(Gang Dong won)ဟာလိမျလညျမှုနဲ့ထောငျထဲရောကျလာပါတော့တယျ….Chi Wonဟာရှနေ့ေJae Wookရဲ့ဖွဈကွောငျးကုနျစငျကိုလညျးသိထားတဲ့သူဖွဈပါတယျ…ဒီလိုနဲ့ရှနေ့ေJae Wookဟာသူ့ရဲ့မတရားခံရမှုကိုပွနျလညျလကျစားခခြေငျြလာပါတော့တယျ…Chi Wonတဈယောကျကတော့ထောငျထဲမှာပဲခနနခေဲ့ရပွီးအပွငျရောကျသှားတဲ့အခါရှနေ့ေJae Wookရဲ့လူယုံတျောတဈယောကျအနနေဲ့သူ့ကိုကူညီပွီးအမှနျတရားကိုရှာဖှပေေးပါတော့တယျ…
ဒီလိုနဲ့ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ??ရှနေ့ေ့Jae Wookတဈယောကျသူမတရားခံရမှုအမှနျပျေါပေါကျပွီးထောငျထဲကလှတျလာမလား???ထောငျထဲရှနေ့ေJae Wookရဲ့အကူအညီနဲ့အပွငျကChi Wonတဈယောကျအကောငျးဆုံးလုပျနိုငျမလား?? စိတျဝငျစားစှာနဲ့ခံစားကွညျ့ရှုကွညျ့ကွပါနျော…
Byun Jae Wook(Hwang Jun Min)ဟာ အစိုးရရှေ့နေအဖြစ်လုပ်ကိုင်လာတာကြာပါပြီ… သူဟာဒေါသကြီးတယ်စိတ်မရှည်ပြီးတော့
ဒါ့အပြင်သက်သေတွေအားလုံးကလည်းရှေ့နေJae Wookကိုပဲညွှန်ပြနေပါတယ်…အဲ့လိုနဲ့ရှေ့နေJae Wookဟာလူသတ်သမားအဖြစ်
သူဟာထောင်ထဲမှာစစရောက်ခြင်းသိပ်မရင်းနှီးပေမယ့်မကြာခင်သူရဲ့အရင်ရှေ့နေအလုပ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ထောင်သားတွေကိုကူညီပေးပြီးထောင်သားတွေချစ်ခင်လေးစားရဲ့အကိုကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်…သူနေတဲ့ထောင်မှာ”ဆရာ”တစ်ဆူလိုအေးဆေးဖြစ်လာပါတော့တယ်…၅နှစ်အကြာမှာChi Won(Gang Dong won)ဟာလိမ်လည်မှုနဲ့ထောင်ထဲရောက်လာပါတော့တယ်….Chi Wonဟာရှေ့နေJae Wookရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုလည်းသိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ရှေ့နေJae Wookဟာသူ့ရဲ့မတရားခံရမှုကိုပြန်လည်လက်စားချေချင်လာပါတော့တယ်…Chi Wonတစ်ယောက်ကတော့ထောင်ထဲမှာပဲခနနေခဲ့ရပြီးအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါရှေ့နေJae Wookရဲ့လူယုံတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုကူညီပြီးအမှန်တရားကိုရှာဖွေပေးပါတော့တယ်…
ဒီလိုနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ??ရှေ့နေ့Jae Wookတစ်ယောက်သူမတရားခံရမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်ပြီးထောင်ထဲကလွတ်လာမလား???ထောင်ထဲရှေ့နေJae Wookရဲ့အကူအညီနဲ့အပြင်ကChi Wonတစ်ယောက်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလား?? စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါနော်…
Han Jae-young Hwang Jung-min Kang Dong-won Kim Eung-soo Lee Sung-min Park Jong-hwan Park Sung-woong
Option2yuudrive.me 589 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 589 MB SD (480p)
Option 8 yuudrive.me 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9sharer.pw 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1